को हुन यी भाईरल जोडि ? - IAUA
को हुन यी भाईरल जोडि ?
ramkrishna October 8, 2017	को हुन यी भाईरल जोडि ?
हिजो आज सोसियल मिडियामा एक अत्यन्तै कालो वर्णको केटा र राम्री सेतोवर्णको केटीको फोटो भाइरल भैरहेको छ । फेसबुकमा मात्र हैन यी दुइको फोटो ट्वीटर, व्ह्वाट्सएप मा पनि उत्तिकै भाइरल भैरहेको छ ।
Previous Previous post: तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ
Next Next post: हिन्दू धर्ममा प्रयोग गरिने संकेत र प्रतीकहरुको अर्थ के ?